नागरिकता विधयेक मधेसको संस्कृति र पहिचान माथि प्रहार हो : सांसद यादव – Ankush Daily
नागरिकता विधयेक मधेसको संस्कृति र पहिचान माथि प्रहार हो : सांसद यादव
On ९ असार २०७७, मंगलवार १६:३७
काठमाडौँ ९ असार ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद प्रदीप यादवले राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता संसोधन सम्बन्धि ल्याएको विधयेक मधेस विरोधी भएको बताउँदै मधेस माथी षडयन्त्र गर्न ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
संसद्मा गर्जिंदै उनले भने, ‘भारतीय चेलीलाई नेपला ल्याएर ७ वर्ष कुराएर नागरिकता दिने रे, विवाह भएको एक वर्ष भित्र बच्चा जन्मिन्छ, नेपालको कानुन हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ, बिना नागरिकता एउटा सिम कार्ड समेत किन्न मिल्दैन, बैंकमा खाता पनी खोल्न मिल्दैन, लोकसेवा परिक्षाको लागी आवेदन फारम भर्न पनि मिल्दैन सभामुख महोदय, हुँदा हुँदै अब बिना नागरिकता पानि पनि पाइंदैन होला, ७ वर्ष सम्म त्यो चेली बेटीले के गर्न? केहिले प्रश्न गर्छन एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता, यस्तो पनि हुन्छ? म के बताईं दिउ भने हाम्रो मधेसमा नारीले एक पल्ट सिन्दुर लगाईसके पछी आफ्नो श्रीमानलाई पति प्रमेश्वर ठान्छ, यता उति जाँदैन, त्यहि उसको संसार हुन्छ । हाम्रो संस्कृती र परमपरा त्यस्तै छ, यो कुराहरु धेरैलाई तितो लाग्छ होला तर सबै कुरा म भन्न चाहन्न ।’